[ March 20, 2019 ] Haayada Amnesty International oo sheegtay in dad rayid ah lagu dilay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya	Somalia
[ March 20, 2019 ] Hoggaamiyihii ugu caansanaa burcadbadeeda Soomaaliya oo lagu dilay gobolka Mudug	Somalia
[ March 20, 2019 ] Somali pirate kingpin killed in Mudug region	English News
[ March 19, 2019 ] Afar dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka fuliyay Shabeellaha Hoose	Somalia
[ March 18, 2019 ] Haayada Laanqeyrta Cas oo ka shaqeynaysa is-dhaafsiga maxaabiista Puntland iyo Somaliland	Puntland
Shirka maamul goboleedyada Soomaaliya oo ka faurmay magaalada Baydhabo. [Sawirka]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Axmed Maxamuud Maxamed oo si weyn loogu yaqaanay Garaad, kaasoo kamid ah raga ugu waa-weyn ee burcadbadeeda Soomaaliya ayaa lagu dilay gobolka Mudug Isniintii, sida ay sheegeen eheladiisa iyo ciidamada booliiska. Garaad ayaa [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Afar dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay gudaha Soomaaliya. Duqeynta ayaa Isniintii ka dhacday deegaanka Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) [...]
Haayada Laanqeyrta Cas oo ka shaqeynaysa is-dhaafsiga maxaabiista Puntland iyo Somaliland
Garoowe-(Puntland Mirror) Haayada Laanqeyrta Cas ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan ICRC ayaa ka shaqeynaysa sidii ay u fududeyn lahayd is-dhaafsiga maxaabiista ee u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland, sida ay sheegeen ilo-wareedyo. Axadii, saraakiil [...]
Puntland oo iclaamisay in berito ay tahay Ciidul Fitr
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa iclaamisay in berito ay tahay maalinta kowaad ee Ciidul Fitr. Wasiirka Cadaalada iyo Arrimaha Diinta Saalax Xabiib Jaamac ayaa warbaahinta ugu sheegay gudaha magaalada Garoowe caawa fiidkii. Dhanka kale, Madaxweynaha Puntland [...]
At least 10 killed in Al-Shabab attack on AMISOM base in Beledweyne
Beledweyne-(Puntland Mirror) At least 10 people have been killed, including AMISOM soldiers after a suicide bomber has driven a vehicle loaded with explosives into an AMISOM military base in Beledweyne town of Hiran region in [...]